Ego ole ka outsourcing Social Media na-efu? | Martech Zone
Izu ole na ole gara aga, anyị na-enyocha ngwaahịa na ọrụ anyị na-enye ndị ahịa anyị. Dị ka ụlọ ọrụ, anyị nwere akụnụba akụ na ụba na-arụ ọrụ na ngwa ọrụ na nka anyị nwere ike ịkekọrịta n'etiti ndị ahịa - mana uru ndị ahụ ka ga-eweta uru ọzọ dị mkpa iji kwado ọnụahịa ụlọ ọrụ. Anyị enweghị obi abụọ ọ bụla na ndị ọrụ ime ụlọ nwere ike dakọtara nsonaazụ anyị rụzuru yana ego efu ndị ahịa anyị.
N'agbanyeghị nke ahụ, ọnụahịa anyị adabaghị na nkezi ụlọ ọrụ. Maka ụfọdụ ọrụ anyị, anyị kwụkwuru ụgwọ ma nwee ahụ iru ala maka ogo ọrụ anyị. Maka ọrụ ndị ọzọ, anyị na-akwụ ụgwọ obere ego ma jiri obi eziokwu zere ụdị mmekọrịta ahụ na ndị ahịa. Otu n'ime ọrụ ndị ahụ bụ mgbasa ozi mmekọrịta. Mgbasa mgbasa ozi abụghị usoro akpaghị aka. Mgbasa mgbasa ozi na-achọ nlekota, nkwado, uto, mgbasa ozi, nkwalite, itinye aka, nyocha, njikọta, ikekwe asọmpi na ọbụna nkwalite akwụ ụgwọ.
Usoro mgbasa ozi mmekọrịta dị mma chọrọ mgbalị na ike mmadụ mgbe niile iji nweta nsonaazụ na nsonaazụ dị elu. Nke ahụ chọrọ ndị ọrụ nwere ọgụgụ isi na-achọkarị ohere.
Na ihe omuma a, Etu ị ga - esi mefu ego gị na Social Media Budget, Salesforce Canada na-enyocha akwụ ụgwọ nke ime usoro mgbasa ozi mmekọrịta.
Ndị ọrụ ọkachamara na-ere ahịa nwere ike ịga n'etiti $ 4,000 na $ 7,000 kwa ọnwa. Ebe ọ bụ na ngụkọta ego ị na-ere n'ahịa kwesịrị ịdị n'etiti 10% nke ego gị zuru ezu, na ahịa dijitalụ gị bụ akụkụ dị oke mkpa, ndị na-ere ahịa ga-ekpebi otu ha si eme atụmatụ ijikwa akaụntụ mgbasa ozi mmekọrịta ha. Nhọrọ ndị kachasị ewu ewu bụ ịchụ onye na-elekọta mmadụ mgbasa ozi, obere ụlọ ọrụ na-ere ahịa, ma ọ bụ ụlọ ọrụ na-ere ahịa ụlọ ọrụ.
Mgbasa mgbasa ozi anaghị aga ebe ọ bụla. N'ezie, atụmatụ mmefu ego nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya ga-abawanye site na 90% na afọ 5 sochirinụ O doro anya na ọtụtụ n'ime nke a bụ n'ihi mgbagwoju anya nke ọwa, mmụba nke asọmpi, yana mkpa maka mmekọrịta 1: 1.
Tags: b2b elekọta mmadụ mediab2c mgbasa oziịde blọgụFacebookforumsgoogle otuinstagramLinkedInVidio Ahịaezighi ezintinye fotoPinterestPodcastingndị ahịa canadaelekọta mmadụ ibe edokọbaraelekọta mmadụ mediamgbasa ozi mgbasa ozina-elekọta mmadụ media na-eriSocial Media Marketingmgbasa ozi mgbasa ozi mgbasa ozielekọta mmadụ media outsourceelekọta mmadụ media roielekọta mmadụ media videoTwittervideos